China Shantui 13ton Sd13 Mpamatsy mpamokatra vidin-javatra manintona Hydrostatictrack Roller Bulldozer Track Shoe Link Asbly 228Mc-41156 orinasa sy mpanamboatra | China Construction
Shantui 13ton Sd13 Mpamatsy mpamokatra vidin-javatra mahasarika Hydrostatictrack Roller Bulldozer Track Shoe Link Asbly 228Mc-41156
● Ampiasaina amin'ny motera fanaraha-maso elektronika SC8DK hihaona amin'ny takiana famoahana dingana fahatelo an'ny firenena amin'ny milina tsy amoron-dalana, miaraka amin'ny herinaratra matanjaka, avo lenta ary mitahiry angovo ary ambany ny vidin'ny fikolokoloana;
● Ny coefficient an'ny tahiry torsi dia lehibe, ary ny hery nomena dia mahatratra 105kW;
● Fanatsarana ny sivana rivotra sy ny rafi-pisotroana ary ny setroka, miaraka amin'ny fahafaha-sivana amin'ny 99%, manalava tsara ny androm-piainan'ny motera.
● Ny rafitry ny fampitana dia mifanentana tanteraka amin'ny fihodinan'ny motera, ny faritra avo lenta dia lehibe kokoa, ary ny fahombiazan'ny fandefasana dia avo kokoa;
● Ny rafitry ny fifindran'ny tena namboarin'i Shantui dia nosedraina hatramin'ny ela ny tsena, miaraka amin'ny fahombiazana azo antoka sy ny kalitao azo antoka.
Tontolo iainana mitondra fiara
● Hexahedron cab, habaka anatiny lehibe sy sehatry ny fahitana, FOPS / ROPS dia azo alamina araka ny takiana, azo antoka ary azo itokisana;
● Ny fifehezana elektronika ny throttle an'ny tanana sy ny tongotra dia mahatonga ny fandidiana ho marimarina kokoa sy ahazoana aina;
● Ampiasaina amin'ny terminal fampisehoana sy fifehezana manan-tsaina, fanamafisam-peo sy fanamafisam-peo, sns, hanomezana traikefa mitondra fiara manankarena kokoa, ahafahanao mahafantatra ny satan'ny rafitra amin'ny fotoana rehetra, marani-tsaina sy mety.
● Ny rafitra chassis azo antoka sy azo antoka an'ny vokatra matotra an'i Shantui dia mety amin'ny fepetra asa henjana isan-karazany;
● Ny halavan'ny tany dia lava, lehibe ny fanesorana ny tany, milamina ny fitondrana fiara ary tsara ny passability;
● Angady fanadiovana, lapety, angady iraisampirenena, sns., Azo alamina arakaraka ny fepetra miasa manokana, miaraka amin'ny fahaiza-miasa mahomby, ary ny jiro fiasan'ny LED tsy maintsy atao mba hanatsarana ny fahaizan'ny jiro amin'ny fananganana alina, hahatonga azy io ho azo antoka sy azo antoka kokoa.
● Ny ampahany amin'ny rafitra dia manana ny kalitaon'ny vokatra matotra an'i Shantui;
● Ny fantsom-pifandraisana herinaratra dia miaro ny fiarovana ny fantsom-pifandraisana sy ny fanaparitahana tsipika hampisaraka ny tsipika, amin'ny haavon'ny fiarovana avo;
● Ny singa sivana solika sy sivana rivotra dia manana endrika mitovy, fikojakojana tokana.
zavatra UNIT SD13
L × W × H (tsy tafiditra i Ripper) MG 4492 × 3185 × 2950
Ny lanjan'ny asa (tsy tafiditra ao ny Ripper) t 13.7
maotera - Shangchai SC8D143G2B1
Hery naoty kW / rpm 95.5 / 1900
Fahaizana manavaka ° 30
Karazam-bolo - Loza mitongilana mahitsy Sud-tsipika
Ny sakany MG Loza mitongilana mahitsy 3185 × 1090 Kambana zoro 3475 × 915
Fahaiza-manao m3 Loza mitongilana mahitsy 3.7 Angola volo 3.4
Mitete eo ambanin'ny tany MG 590
Asandrato ny haavon'ny ravina MG 930
Karazana Ripper - Ripper telo-shank
Mamaky lalina ny ripper MG 467
Fampiakarana haavon'ny ripper MG 559
Isan'ny mpitatitra (isaky ny lafiny) - 2
Isan'ny mpamily lalana (lafiny tsirairay) - 6
Isan'ny kiraro (isaky ny lafiny) - 38
Ny sakany amin'ny kiraro MG 460
Fatra fandrefesana MG 1880
Ny halavan'ny tany sy ny tsindry amin'ny tany mm / MPa 2365-0.063
dity MG 190
Hafainganam-pandeha km / h 0–3.2
Hafainganam-pandeha km / h 0–3.9
Teo aloha: SHANTUI 54.5ton 450hp Vidiny manintona Shantui crawler capacity_ track Bulldozer SD42-3 amidy dozer fiyat
Manaraka: Liugong 48 taonina China New Hydraulic Crawler Excavators Digger machine ho an'ny harena ankibon'ny tany 950E
SHANTUI 54.5ton 450hp Vidiny manintona Shantui ...